Vumelani, kungekuhle kakhulu ukuba nekhefu ngokusebenzisa iinwele ukujonga indlela ngexesha ngalinye linamawele amaninzi. Ngelishwa, ukulahleka kweenwele yinkinga enkulu kunye enzulu ngoku. Izinwele ziphuma ngaphandle kokuxinzeleleka kweengxaki, izifo ezidlulileyo, iimeko ezingqongileyo ezingqongileyo. Ngoko ke, ukuba iinwele zakho ziqala ukuthoba ngokukhawuleza, qhagamshelana nogqirha. Kwaye emva kokuba uqinisekise ukuba umzimba wakho konke ukwenzela ukuba uqale ukugcina izinwele zakho.
Ngoku i-Intanethi igcwele iirephepheni ezahlukileyo zeenwele zeenwele. Konke oku kulungile, kodwa kukho amaxesha apho sele ulahlekelwa yilo lonke ithemba lokusindiswa kweenwele. Kwaye kulo mzekelo, abafazi bathatha inkonzo kwiingcali. Ngoko ke, ukuba iinwele zakho ziwayo, ziba zize zibe zincinci, abacebisi banokukucebisa ukuba unyange iinwele nge-mesotherapy.
I-Mesotherapy yeenwele yinkqubo yokonkqisa eyenzeka kuphela kwiiklinikhi zokuzithoba ezizodwa, kwi-homeotherapy ye-mesotherapy ayikwenziwanga. I-Mesotherapy yenziwa ngokujova kwi-scalp. Ngaloo ndlela, iivithamini, ukungena kwizinwele zezinwele, ukuthintela ukulahleka kweenwele, kunye nokubonakala kwintsimbi.
Ngaphambi kwenkqubo, iimvavanyo zinyanzeliso, ukuchonga i-allergies kumacandelo enjini. I-Mesotherapy yeenwele iyaphikisana nabasetyhini abakhulelweyo, abantu abanezifo ezingapheliyo, ngexesha lokutya, ngexesha lokuya esikhathini.
Inqubo idlula imizuzu engama-40, emva kokujova, kunokuba nemivimbo emincinci eya kudlula ngeveki. Ngamaxesha amaninzi kufuneka uyenze i-mesotherapy ikwacetyiswa yi-cosmetologist, kodwa ngenxa yempembelelo engcono, kufuneka wenze iinkqubo ezili-8 kwiiveki ezi-5.
Ukusebenza kwe-mesotherapy kuya kuxhomekeka kwinqanaba lomonakalo wentlungu kunye nomyinge wokuzibandakanya kwamavithamini.
Imiphumo emibi emva kokuba i-mesotherapy ihlukaniswe zibe zimbini iintlobo: ezizodwa kwaye ezingabalulekanga. Ezicacileyo zihambelana nokuphendula komzimba kwiisenki, kwaye akuthethi ngqo kwinkqubo yenkqubo. Ukungabalulekanga kubandakanya intlungu, ubomvu, iimbumba ezincinci. Imiphumo echaphazelekayo ngokuqhelekileyo ihlala yesikhashana, umzekelo, emva kokusungulwa kwe-vitamin "B" unokuziva uvakalelo olutshisayo oluya kudlulayo kungekudala. Kwakhona, musa ukulibala malunga nokuphendula okuthe tye, okubangelwa yiphina isilwanyana esifakwe kwijojo.
Abaninzi abameli bezesondo ezifanelekileyo banomdla kwixesha apho i-mesotherapy ingenziwa khona. Oogqirha bacebisa ukuqhuba iiseshoni ze-mesotherapy ukususela kwiminyaka engama-20-25. Konke kuxhomekeke kwindlela yolusu kunye nokuchasene. Ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nenkqubo enjalo, intombazana encinci kufuneka iqhagamshelane neengcali eziza kubanika iincoko zeenwele. Amantombazana amancinci angenza le nkqubo ukukhusela ukulahleka kweenwele.
Ngoku kukho iifom zikhona iingxabano ezinkulu ezinobungozi be-mesotherapy okanye luncedo. Omnye uthanda umntu ochasene nalo. Abasetyhini abaninzi babhala ukuba i-mesotherapy iye yawasindisa ngokoqobo iinwele, abazange bayeke ukuwa ngaphandle, kodwa baba baninzi kwaye banempilo. Omnye umntu ochasene naye uyacebisa ukuba angadli imali kunye nexesha elingenanto, kuba isiphumo sinjalo. Kwimeko nayiphi na into, ukuba i-mesotherapy ayinakunceda, ke ayibuhlungu. Kodwa ukhetho lusekho. Kufuneka uqikelele i-pros and cons cons, cinga ukuba uzimisele ukuchitha imali encinci kwimigaqo engenakunceda. Nangona yonke into ingaba kunye nangendlela eyahlukileyo, kwaye uya kufumana inwele eninzi eninzi ekulindileyo.
Kwakhona ndifuna ukuba uqaphele ukuba amadoda angayifumana kule nkqubo. I-Mesotherapy iya kubanceda ukuthintela i-baldness kunye nokujamelana ne-dandruff.
Ungaba njani i-blonde ngaphandle kwe-yellowness?
Ubhontshisi be-Haircut ebusweni obujikelezayo
Imihla yokubuyisela iinwele ekhaya
Iimpuphu emva kokucheba
Iintloko ezinomvumba ziselula
Ioli yeenwele zeenwele
Indlela yokukhetha inwele yowesifazane ngokubhekiselele kwimo yobuso bakhe?
Ukutshala iingxube kunye neenwele ezinde
I-Tonic yeenwele - imibala
U-Elizabeth Olsen kwi-swimsuit
Unyango lwe-prostate kunye nezilwanyana zamalungu
Indlela yokwenza iidodoli zidoli?
Inja ayidli nto, isela kuphela amanzi
Imincintiswano yePasika kubafundi nakubantu abadala
Ulwakhiwo lwengqondo yomntu
Ingqungquthela yenkukhu kunye ne-gelatin - iindlela zokuqala zokutshintshela isobho
Amagama amabhinqa aseBritani
Indlela yokubiza umnxeba?
I-Mackerel ephosa kwi-grill-i-recipes ezonwabisayo kunesitya esikhulu sepikiniki
Isobho sePee puree
U-Ozzy noSharon Osborn bahalalisana ngomnyaka wama-35 womtshato
Iinkalo ezinomdla malunga nokuba uya kucinga ntoni imini nobusuku
Ungakususa njani iphunga kwifriji?
I-Mackerel e-foil - zokupheka ezithakazelisayo nezolisayo kwiitya zentlanzi
Uhlobo lwe-cat Maine Coon